Soo dejisan Freegate 7.90 – Vessoft
WindowsShabakadVPN iyo WakiilFreegate
Bogga rasmiga ah: Freegate
Freegate – software ah in ay garab block iyo aamin xiriir si goobahaasi. software wuxuu isticmaalaa shabakadaha ka mid ah server wakiil gaar ah, iyaga oo uu baaritaanku oo si deg deg ah isku xira u server free. baaritaan Freegate for server wakiil in hab toos ah oo u saamaxaaya in ay gacanta bedeli server si ay u dardar xidhiidhka ka. software The awoodo si aad u nadiifiso taariikhda websites booqday ee daalacashada cayimay. Freegate leeyahay interface a fudud oo dareen leh.
Dhaaftaan ee ku furid ah websites
xiriir Automatic u server wakiil heli karaa
Change of server wakiil haddii ay lagama maarmaan u
Baarta oo taariikhda web-khayraadka booqday
Soo dejisan Freegate
Faallo ku saabsan Freegate
Freegate Xirfadaha la xiriira